यौ८नका कुरामा मान्छेहरु किन धेरै चासो राख्छ ? ‘ यौ८न कल्पना पनि एउता राे,ग ‘ – Ujyaalo Patrika
यौ८नका कुरामा मान्छेहरु किन धेरै चासो राख्छ ? ‘ यौ८न कल्पना पनि एउता राे,ग ‘
यौ८न हिं८सा बढेको भन्दै सरकारले अहिले अ८श्लिल साइट माथि प्र८तिबन्ध लगाएको छ । अ८श्लि’ल साइट बन्द गरिएपछि यौ८न हिं८साको दर र प्रवृत्ति फेरिएको छ ? यसको छुटै समीक्षा होला । २१ औं सताब्दीका विचारक ओशोले भने यौ८न र त्यसको प्रवृत्तिलाई फरक ढंगले परिभाषित गरे ।
यौ८नलाई जति लुकाउन खोज्यो, जति दबाउ८न खोज्यो, यो उत्तिनै विकृ८त भएर आउँछ भन्ने ओशोको विचार थियो । हुनपनि यौ८न हिं८साको प्रवृत्ति हेर्दा उनको भनाई सही लाग्छ ।
ओशोले यौ८न एवं का८मुकताको बारेमा खुलेर आफ्नो राय प्रकट गरे । यौ८न स८म्बन्धीको उनको धारणा वृहत, स्पष्ट र गहन मानिन्छ । दुनियाले यौ८नलाई ‘छा८डा’ र ‘गो८प्य’ कुरा भनिरहेको बेला ओशोले यसप्रति उदार धारणा पेश गरे । त्यही कारण कतिपयले उनलाई ‘से८क्स गुरु’ पनि भने ।
यौ८न सम्ब’न्धी नै उनले एउटा पुस्तक पनि लेखे, ‘सं८भोग से समाधि ओर’ ।
ओशो भन्छन्, ‘म युवासँग भन्छु कि तिमी जुन संसार निर्माण गर्न संलग्न छौ, त्यसमा यौ८न स८म्बन्धलाई वर्जित कदापी नगर । अन्यथा मान्छे अरु बढी का८मुकभन्दा कामु’क हुनेछन् । हुन त मेरो यो कुरा ठिक उल्टो लाग्न सक्छ ।’
एक पटक ओशो आफ्ना शिष्यको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए । उनले भने, ‘म एक गाउँमा थिए । त्यहाँ केही विचारक र सन्त साधु मिलेर अ८श्लि’ल पोस्टर वि८रोधी एक सम्मेलन गरिरहेका थिए । उनीहरुको विचारमा अ८श्लिल पोस्टर भित्ता वा ढोकामा टाँस्दा त्यसले का८मुकता अरु बढाइदिन्छ ।’
ओशोले थप्छन्, ‘ति गुरु, मान्यजन जसले स्त्री र पुरुषलाई मिल्न दिदैन । त्यही कारण उनीहरु लुकीछिपी अश्लि’ल पुस्तक पढ्छन् । अ८श्लिल तस्वीर हेर्छन् । अ८श्लिल फिल्म बनाउँछन् । किनभने यी सबै सामाग्री आकाशबाट आउने होइन, मान्छेको आवश्यक्ता हो ।’
‘युवकलाई म भन्न चाहन्छु कि, तिम्रो आमाबुवा, तिम्रो पूर्खा, तिम्रो हजारौं बर्षअघिको पीढि यौ८न स८म्बन्धबाट भ यभीत भयो । तिमी भ यभित नहुनु । तिमीले यसलाई बुझ्ने कोशिस गर
यसैले प्रश्न यो होइन कि अ८श्लिल फिल्म किन ? प्रश्न त यो हो कि मान्छेलाई यसको जरुरत किन ? यस्ता फिल्म त्यसै बनाइएको छैन । कसैले व्यर्थ आफ्नो पैसा खर्च गरिरहेको छैन । बजारमा यसको माग छ । त्यो माग कसरी पैदा भयो ?
ओशो थप्छन्, ‘युवकलाई म भन्न चाहन्छु कि, तिम्रो आमाबुवा, तिम्रो पूर्खा, तिम्रो हजारौं बर्षअघिको पीढि यौ८न सम्ब’न्धबाट भ८यभीत भयो । तिमी भ८यभित नहुनु । तिमीले यसलाई बुझ्ने कोशिस गर । तिमीले यसलाई पहिचान गर । तिमीले यस सम्बन्धमा नयाँ आधुनिक खोज भएको कुरा पढ । यस सम्बन्धमा खुला चर्चा गर र बुझ्ने कोशिस गर । वास्तवमा यौ८न के हो ? के हो यसको संयन्त्र ? यसको यन्त्र के हो ? के हो यसको आकंक्षा ? के हो यसको प्यास ? के हो प्राणभित्र लुकेको र’हस्य ? यसलाई बुझ । यसको विज्ञानलाई बुझ ।
ओशोका अनुसार जब हामी यौ८नका लागि भड्क’दैनौ, यौ८न प्राप्तिका लागि समय र उर्जा नष्ट गर्दैनौं, तब हामी आफ्नो समय र उर्जा कुनै रचनात्मक काममा लगाउनेछौ
यौ८नबाट भाग्ने वा बर्जित गर्ने गल्ती नगर । आँखा बन्द नगर । तिमीलाई थाहा छ, तिमीले यौ८नलाई जति धेरै बुझ्नेछौं, उत्तिनै यसबाट मुक्त हुनेछौं । तिमीले जति यौ’नलाई बुझ्नेछौं, उत्तिनै स्वस्थ्य हुनेछौं । तिमीले जति यसको फ्याक्ट अर्थात तथ्यलाई बुझ्नेछौ, उतिनै का८मुकताको ‘फिक्सन’बाट तिमीले छुटकारा पाउनेछौं ।
जति मनलाई रोकिन्छ, मन त्यही दौडन्छ । र, दौडदा सबै शक्ति र उर्जा नष्ट हुन्छ । म तिमीलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने, जुन देशमा यौ८नलाई स्वस्थ रुपले स्वीकार गरिदैन, त्यहाँ प्रतिभाको जन्म पनि हुँदैन ।
ओशोका अनुसार जब हामी यौ८नका लागि भड्क’दैनौ, यौ८न प्राप्तिका लागि समय र उर्जा नष्ट गर्दैनौं, तब हामी आफ्नो समय र उर्जा कुनै रचनात्मक काममा लगाउनेछौ । कुनै खोजमा, आविष्कारमा, कला, साहित्य, संगितमा त्यो उर्जा रुपान्तरण हुनेछ ।
यौ८नलाई छा८डा भनेर वा बर्जि’त गरेर यसको सही व्यवस्थापन हुँदैन । यौ८न बर्जित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यदि त्यसो भएमा मान्छेमा यौ८नकुष्ठा हट्नेछ । का८मवासनाबाट मुक्त हुनेछन् । लुकीछिपी वा मौका छोपेर यौ८न कृ८त्य गर्न उक्सने छैन । ओशोको भनाई छ, यौ८नलाई स्विकार गर । यौ८नलाई बुझ । यौ८नको सौन्दर्यलाई बुझ ।
Previous यसरि थाहा पाउनुहोस महिलालाइ यौ’ न चाहाना भएको : देखाउछन् यस्तो व्यवहार (एक अध्यन)
Next युवती ‘भ’, र्जि’न छ/छैन कसरी थाहा पाउने ?